“မိသားစုချင်းနားလည်မှု လွဲသွားရတဲ့ အကြောင်းတွေကို အလုံးစုံ ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာတဲ့ ပိုင်ဇေရဲထွန်းဖခင်” - ရပ်ကွက်
ပိုင်ဇေရဲထွန်းနဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ ဇင်သဲနိုင်တို့ဟာ ဖခင်ရဲ့ အိမ်နှင့်ခြံကို ယူငင်ပေါင်နှံထားတဲ့သတင်းတွေဟာ မနေ့အချိန်က ဖေ့ဘုတ်လူမှုတခွင်မှာ ဟိုးလေးတကျော်ကျော်ပျံ့နှံ့ခဲ့တာပါ။ မကြာခင်ဆုံးရှုံးရတော့မယ့် အိမ်နှင့်ခြံကိုလည်း ဖခင်ဖြစ်သူက ပြသထားပြီးတော့ သားဖြစ်သူ ပိုင်ဇေရဲထွန်းကို စဉ်းစားကြည့်ဖို့ပါ ရေးသားထားခဲ့ပြန်ပါသေးတယ်။
ဒီကနေ့ မှာတော့ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးရဲထွန်းက သားဖြစ်သူ ပိုင်ဇေရဲထွန်းနဲ့ ဇင်သဲနိုင်တို့ ကို ထိခိုက်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲ အဆက်သွယ်လုပ်စေချင်တာ အဓိကကြောင့်ဒါတွေ တင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။
“သားပိုင်ပိုင် နဲ့ သမီးသဲသဲ ဖေဖေ နဲ့မေမေ အလွန်ဘဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ သားနဲ့သမီးအလုပ်ကိစ္စနဲ့ ပြည်ပ ခရီးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ ဖေဖေ ဖုန်း ခေါ်တာမရတဲ့အတွက် ဖေဖေလူကြီးတယောက်အနေနဲ့ စိတ်ပူလွန်သွားတယ် သားတို့သမီးတို့. ကိုဖေဖေ ထိခိုက်ဖို့မရည်ရွယ်သလို မထိခိုက်စေချင်တာလဲအမှန်ပါဘဲ။ သားတို့ သမီးတို့ ဖေဖေတို့ကို ဆက်သွယ်စေချင်တာ အဓိကပါဘဲ။ ဘဏ်ရဲ့တာဝန်ခံနဲ့ အားလုံးချိတ်ဆက်ပီး ချေးငွေပြန်ဆပ် ထားတယ် အားလုံးလဲညှိနိူင်းထားတယ်ဆိုတာစီစဉ်ထားမှန်းမသိလိုက်လို့ ရေးလိုက်တာပါ။ ပီးတော့ ဒီအိမ်ကြီး ပေါင်နှံထားတဲ့ ငွေကြေးတွေနဲ့. သမီးသဲသဲရဲ့ ရတနာလုပ်ငန်း နဲ့ သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းကိုလဲအားလုံးကိုနားလည်စေ ချင်ပါတယ်။ သားပိုင်ပိုင်နဲ့သမီးသဲသဲတို့. ဘဏ်မှာငွေသွင်းထားပီးသွားကြောင်းကို သိရတဲ့အတွက် ဖေဖေမေမေ တို့ဝမ်းသာရပါတယ်။ မိသားစုချင်းနားလည်မူလွဲသွားရခြင်းကို အားလုံးဘဲ နားလည်စေချင်ပါတယ်”
ပိုင်ဇေရဲထွန်းရဲ့ ဖခင် ဦးရဲထွန်းကတော့ မိသားစုချင်းနားလည်မှုလွဲသွားရတဲ့ အကြောင်းတွေဖြစ်တာကြောင့် အားလုံးကို နားလည်စေချင်တယ်လို့လည်း မေတ္တာရပ်ခံသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
Credit: Myanmar News Market